Al-Shabaab oo sheegatay masuuliyada weerarkii lagu laayey dadkii saarna Buska dalka Kenya - iftineducation.com
iftineducation.com – Ururka al-Shabaab ayaa si rasmi ah u sheegtay in uu ka dambeeyay weerarkii saaka aroortii ka dhacay meel ku dhow magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya oo lagu laayey dad badan oo la socday gaari rakaab ah.
Warsaxaafadeed kasoo baxay ururka oo uu ku saxiixna Afhayeenka Cali Dheere ayaa lagu sheegay in weerarka loogu aar-gudayay dhibaatada Ciidamada Kenya ku hayaan dadka muslimiinta ee ku nool magaalada Mombasa iyo Soomaaliya.
Afhayeenka ayaa kusii hanjabay in aysan joogsan doonin weerarada isla markaana sii wadi doonaan.
Goor sii horeysay ayaa la saadaaliyey in weerarka lagu laayey 28-qof oo saarna bas ay ka dambeyso ururka al-Shabaab oo weeraro kala duwan ka fuliyey gudaha Kenya.
Dadka la laayay ayaa lagu soo waramaaya in ay ahaayeen dad aan muslimiin ahayn oo dableydii weerarka geystay ay kala sooceen dadka muslimiinta iyo kuwa aanan ahayn. Buska ayaa ka ambabaxay magaalada Mandheera oo u dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya, wuxuuna kusii jeeday magaalada Nairobi ee caasimada Kenya.
Muslimiinta Kenya iyo Hay’addaha u dooda xuquuqul aadanaha ayaa si kulul u cambaareyey weerarka wuxushnimada ah.
Soomaali ka dagaalamayay dalka Suriya oo duqeyn diyaaradeed lagu dilay